MW CMC Iyo Kulankii Waftiga Somaliland - Cakaara News
MW CMC Iyo Kulankii Waftiga Somaliland
Jigjiga ( Cakaaranews ) Talaado, 15ka march 2016. Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa saaka hoolka shirarka ee xafiiskiisa kulan kula yeeshay wafti balaadhan oo uu hogaaminayo wasiirka wasaarada arimaha gudaha ee somaliland mudane Cali Maxamed Warancade .
Hadaba madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo waftiga Somaliland ee uu hogaaminayo mudane Warancade ayaa kawada hadlay sii xoojinta arimaha amniga labada dhinac gaar ahaan sii adkaynta amniga xuduuda balaadhan ee u dhaxaysa labada dhinac iyo waliba kor uqaadida xidhiidhka arimaha siyaasada.
Wada hadal balaadhan kadibna waxaa si kago’naanshiiyo leh la iskula qaatay in hal dhinac looga soo wada jeedsado wax alla iyo wixii caqabad ku ah xaalada nabadgelyo ee shacabwaynaha labada dhinac ay kunaaloonayaan, iyo wixii dhibaato ku ah horumarka iyo xasiloonida ay maanta shacabku hadhsanayaan.
Kadibna, waxay waftiga Somaliland kormeer indha-indhayn ah oo khibrad kaqaadasho kusoo mareen hoolka sida caalamiga ah loo dhisay ee KALI oo kuyaala xarunta madaxtooyada DDSI iyagoo waftigu ladhacay qaabka loo dhisay iyo waliba wakhtiga lagu dhisay yaridiisa.
Ugudanbayna, waxaa waftiga loo sii qaatay guryaha martida ee qaryaan dhoodaan.